क्याण्डी क्रसको इनभाईट आएर दिक्क हुनुहुन्छ ? अब आयो समाधान - रामकुमार परियार
Home / प्रविधि / क्याण्डी क्रसको इनभाईट आएर दिक्क हुनुहुन्छ ? अब आयो समाधान
क्याण्डी क्रसको इनभाईट आएर दिक्क हुनुहुन्छ ? अब आयो समाधान
रामकुमार परियार Monday, May 11, 2015 0
न्युयोर्क- क्यान्डी क्रसको नोटिफिकेशनले हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईँका लागि फेसबुकले खुसीको खबर ल्याएको छ । फेसबुकलले त्यस्ता रिक्वेस्ट र रिमान्डरलाई ब्लक गर्ने फिचर ल्याएको छ ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताले क्यान्डी क्रसको नोटिफिकेशनले आजीत भएको भन्दै गुनासो गरेपछि फेसबुकले यसबाट छुटकारा पाउने विधिको विकास गरेको हो । जसको माध्यमबाट प्रयोगकर्ता चयनले फेसबुक प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
यसका लागि फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसबुक खाताको सेटिङ मिलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रयोगकर्ताले सेटिङमा दिइएको 'ब्लकिङ' अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आउने 'ब्लक एप इनभाइट्स' मा क्लिक गर्नुपर्छ । यो अप्सनपछि यस्ता रिक्वेस्ट पठाउने साथीहरुको नाम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको नाम सेलेक्ट गरेपछि ती व्यक्तिहरुले कुनै पनि प्रकारका रिक्वेस्ट पठाउन सक्ने छैनन् ।
यो सेटिङलाई प्रयोग गरेर त्यस्ता साथीलाई सधैंका लागि ब्लक समेत गर्न सकिन्छ ।